Iindaba - Ngaba ishishini elinxibelelana ngombane liya kuba "lixhoba" le-COVID-19?
Ngaba ishishini lonxibelelwano lokujonga liya kuba "lixhoba" le-COVID-19?
Ngo-Matshi, i-2020, i-LightCounting, umbutho wophando kwimarike yokunxibelelana, kuvavanye ifuthe le-coronavirus entsha (i-COVID-19) kwishishini emva kweenyanga ezintathu zokuqala.
Ikota yokuqala ye-2020 isondela esiphelweni sayo, kwaye umhlaba ukhathazwe sisibetho se-COVID-19. Amazwe amaninzi ngoku acinezele iqhosha lokuphumla kwezoqoqosho ukunciphisa ukusasazeka kwesifo. Nangona ubuzaza nobude balo bhubhane kunye nefuthe lawo kuqoqosho zisekhona ngokungaqinisekanga, ngokungathandabuzekiyo kuya kubangela ilahleko enkulu ebantwini nakuqoqosho.
Ngokuchasene nale mvelaphi imbi, unxibelelwano ngocingo kunye namaziko edatha atyunjwe njengeenkonzo ezisisiseko ezibalulekileyo, ezivumela ukuqhubeka kokusebenza. Kodwa ngaphaya koko, sinokulindela njani ukuba uphuhliso lwetekhnoloji yokunxibelelana / yokunxibelelana kwendalo?
I-LightCounting ifikelele kwizigqibo ezi-4 ezisekwe kwinyani esekwe kwiziphumo zokujonga kunye nokuvavanya kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo:
I-China iyaqhubeka kwakhona kwimveliso;
Amanyathelo okuzahlula eluntwini aqhuba ibango le-bandwidth;
Inkcitho yeziseko zophuhliso ibonisa iimpawu eziqinileyo;
Ukuthengiswa kwezixhobo zenkqubo kunye nabenzi bamacandelo kuya kuchaphazeleka, kodwa kungabi yingozi.
ILightCounting ikholelwa ekubeni ifuthe lexesha elide le-COVID-19 liya kuba nefuthe kuphuhliso lwezoqoqosho lwedijithali, kwaye ke ngenxa yoko linabela nakwishishini lonxibelelwano lokujonga.
Isazinzulu se paleontologist uStephen J. Gould's "Punctuated Equilibrium" sikholelwa ekubeni indalo yendalo ayiqhubeki ngesantya esiphantsi kwaye ihlala ihleli, kodwa iba nozinzo lwexesha elide, apho kuya kubakho uguquko olukhawulezileyo olukhawulezileyo ngenxa yokuphazamiseka okukhulu kwendalo. Ingcamango efanayo iyasebenza kuluntu nakuqoqosho. I-LightCounting ikholelwa ekubeni ubhubhane we-coronavirus we-2020-2021 unokuba luncedo kuphuhliso olukhawulezayo lwendlela "yoqoqosho lwedijithali".
Umzekelo, eUnited States, amashumi amawaka abafundi ngoku baya kude kwiikholeji nakwizikolo eziphakamileyo, kwaye amashumi ezigidi zabasebenzi abadala kunye nabaqeshi babo bafumana umsebenzi wesikolo okokuqala. Iinkampani zinokuqonda ukuba imveliso ayichaphazelekanga, kwaye kukho izibonelelo ezithile, ezinje ngokuncitshiswa kweendleko zeofisi kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwegesi. Emva kokuba i-coronavirus igqityiwe phantsi kolawulo, abantu baya kuncamathisela ukubaluleka kwimpilo yezentlalo kunye nemikhwa emitsha enjengokuthenga ngaphandle kokuchukumisa kuya kuqhubeka ixesha elide.
Oku kufuneka kukhuthaze ukusetyenziswa kwezipaji zedijithali, ukuthengwa kwe-Intanethi, ukutya kunye neenkonzo zokuhambisa ukutya, kwaye sandise ezi ngcinga kwiindawo ezintsha ezinje ngeevenkile ezikhemesti. Ngokufanayo, abantu banokuhendwa sisisombululo sezinto zokuhamba zikawonkewonke, ezinjengeendlela ezihamba ngaphantsi komhlaba, oololiwe, iibhasi kunye neenqwelo moya. Ezinye iindlela zibonelela ngokuzikhusela ngakumbi, ezinje ngebhayisikile, iiteksi ezincinci zeerobhothi, kunye neeofisi ezikude, kwaye ukusetyenziswa kunye nokwamkelwa kwazo kunokuba ngaphezulu kunaphambi kokuba intsholongwane isasazeke.
Ukongeza, ifuthe lentsholongwane liza kuveza kwaye libonakalise ubuthathaka kunye nokungalingani ekufikeleleni kwe-broadband kunye nofikelelo kunyango, oluya kukhuthaza ufikelelo olukhulu kwi-Intanethi esisigxina kunye neselula kwiindawo ezihlwempuzekileyo nasemaphandleni, kunye nokusetyenziswa okubanzi kwe-telemedicine.
Okokugqibela, iinkampani ezixhasa utshintsho lwedijithali, kubandakanya iAlfabhethi, iAmazon, iApple, iFacebook, kunye neMicrosoft zikwindawo efanelekileyo yokumelana nokwehla okungaphephekiyo kodwa okwethutyana kwintengiso ye-smartphone, ithebhulethi, kunye neelaptop kunye nengeniso yentengiso kwi-Intanethi kuba banetyala elincinci, kwaye Amakhulu amawaka ezigidi yemali ehambayo. Ngokwahlukileyo, iivenkile ezinkulu kunye nezinye izinto ezithengiswayo zinokubethwa ngamandla sesi sifo.
Ewe, kweli nqanaba, le meko yexesha elizayo kukuqagela nje. Kucinga ukuba sikwazile ukoyisa imiceli mngeni emikhulu yezoqoqosho nezentlalo ebangelwe ngulo bhubhane ngandlela thile, ngaphandle kokuwela kuxinzelelo lwehlabathi. Nangona kunjalo, ngokubanzi, kufanelekile ukuba sibe kweli shishini njengoko sihamba kwesi saqhwithi.